Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiye ku xigeenka JWXO oo socdaal hawleed ku yimid magaalada Edmonton, Canada.
Gudoomiye ku xigeenka JWXO oo socdaal hawleed ku yimid magaalada Edmonton, Canada.
Wafti heer sare ah oo uu hogaaminaayo Gudoomiye ku xigeenka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaadeeniya mudane DR Maxamed Ismaaciil Cumar ayaa maanta ka soo dagay garoonka weyn ee caalamiga ah ee magaalada Edmonton, Edmonton international airport ee gobolka Alberta dalka Canada .
Gudoomiyaha waxaa garoonka ku soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada Soomalida Ogaadeeniya ee ku dhaqan gobolka Alberta kuwaasoo uu horkacayey isuduwaha jaaliyadaha Canada Yuusuf Maxamed iyo gudoomiyaha jaaliyada magaalada Edmonton halgame cumar xirsi, madaxa hogaanka arimaha ururka ee jaaliyadaha Canada naftii hure Maxamed aadan dubad ( abshir) iyo xubin sare oo ka tirsan JWXO halgame Maxamed maclin axmed.
Waxaa gudoomiyaha markii uu ka soo baxay irid hore ee garoonka waxaa qoorta ugaliyey ubax aad u qurux badan gabdhaha soomaalida ogaadeeniya oo ku labisan dhar laga sameeyey calanka ogaadeeniya runtiina waxaa halkaa ka muuqatay jawi farxadeed oo midba midkale ugu hambalyeynayo in maanta arkaan gudoomiye ku xigeenkooda oo ay mudo sugayeen.
Waxaa g/ xigeenka loo dheelmiyey madashii loogu talo galay in uu ku nasto oo ah huteelweyn oo ku yaala badhtamaha magaalada Edmonton. G/ xigeenku wuxuu u yimid hawlo shaqo iyo in uu la kulmo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ogaadeeniya iyo dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Alberta ee dalka Canada.